Androany amin'ny lalao mampiankin-doha amin'ny Android, Break Square | Androidsis
Lalao Android mampiankin-doha: Androany, Break Square
Ianareo izay mpanaraka fatratra Androidsis ary fantatrao ny tsiriko amin'ny kilalao androidFantatrao tokoa fa ny lalao Android tiako indrindra indrindra, dia misy indrindra lalao tsotra, tsy misy fampisehoana sary ary mety hilalao amin'ny fotoana rehetra nefa tsy mila manana fotoana malalaka be dia be mba hankafizanao azy ireo.
Amin'ity tranga ity dia hanolotra sy hanome sosokevitra iray amin'ireo aho ny lalao tsotra sy maivana indrindra afaka hitako tao amin'ny Google Play Store maimaimpoana. Lalao izay na eo aza ny fahatsorany sy ny fomba fiasa misy azy, tsy midika izany fa iray amin'ireo mampiankin-doha indrindra azoko nilalao tamin'ny terminal Android-ko. Ny anaranao Break square ary araka ny hitanao amin'ny horonantsary eo an-tampon'ity lahatsoratra ity dia tsy afa-manoatra ny isa ambany aho 10.
Inona no atao hoe Break Square?
Ny mekanika an'ny Break square Tsotra be izany fa na ny zaza aza afaka milalao, azo antoka fa tsara lavitra noho izay nomena ahy ity karazana lalao ity ho an'ny Android. Momba ny amin'ny alàlan'ny fanoratana amin'ny toerana rehetra eo amin'ny efijery avy amin'ny Android, ajanony ireo teboka mena midina avy eo an-tampon'ny efijery amin'ny hafainganam-pandeha tsy mandeha hampijanona azy ireo ao anaty boaty manga fotsiny mba hanafoanana ilay boaty voalaza etsy ambony ary hananan'ny marika manokana azy ho teboka iray.
Tsotra sy tsotra ny lalao ka tsy misy mozika any aoriana manelingelina akory ny hany zavatra hataony dia ny manimba ny fiainana ny lalao na mampatahotra antsika bebe kokoa.
Hoy aho, raha tianao lalao tsotra sy maivana ho an'ny Android, fa miaraka amin'izay dia mampiankin-doha amin'ny fahafenoana izy ireo, manoro hevitra anao aho mba hampidina sy hametraka ny Break Square satria azo antoka fa ho tianao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Lalao Android mampiankin-doha: Androany, Break Square
Lalao tsara, tena mampiankin-doha, tsotra ary ambonin'izany rehetra mampiala voly !!
Milatsaka ny rohy mankany amin'ny google play, arahabaona
Fanavaozana vaovao! Ao amin'ny fanavaozana vaovao dia nampifandraisinay amin'ny Google Play Games ny lalao ary nanampy feo izahay.
Manantena izahay fa tianao izany.
Exclusive !!: Fampiharana horonantsary mahatsikaiky mahatsikaiky YayCam izay havoaka amin'ny Play Store amin'ny Alatsinainy 23 febroary ho avy izao
Fanairana Android!: Nahita malware vaovao izay manahafana ny fanakatonana ny Android hataonao ary manafoana mora foana